चर्चित गाइका बिश्नु माझी श्रीमानको नजरवन्दमा-NepalKanoon.com
चर्चित गाइका बिश्नु माझी श्रीमानको नजरवन्दमा
श्रावण ३१, काठमाण्डौ । कवि तथा कलाकार बादल घिमिरेले लोक गायीका विष्णु माझीलाई उनका श्रीमानले नजरबन्दमा राखेको भन्दै उनको विषयमा कुरा उठाउन सञ्चार माध्यम र अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । विष्णु माझी चर्चित लोक गायीका भएपनि उनको चरम शोषण भैरहेको भन्दै उनले फेसबुकबाट यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनको फेसबुक विज्ञप्ति यस्तो छः
लोक दोहोरी क्षेत्रमा बिश्नु माझी अग्रपंक्तिमा आउने नाम, सबैलाई उनको नाम र जादुमयी आबाज का बारेमा थाहा छ, तर उनको बास्तबिक जीवन कस्तो छ धेरैलाई थाहा छैन ।
एक दशक अगाडी बुटवल महोत्सवबाट उनको जादुयी स्वर सुनेर सुन्दरमणी अधिकारीले गायिका बनाउँछु भनेर विष्णुलाई काठमाण्डौँका लागि रात्रीबस चढाएका थिए ।
आज विष्णु यो देशकी महंगी र चर्चित गायिका त बनिन् तर सुन्दरमणीले चढाएको विष्णुको जिन्दगीको रात्रीबस कहाँ पुग्यो कसैलाई पत्तो छैन । लाग्छ विष्णु स्वयं अनभिज्ञ छन्, विष्णुको स्वर नसुन्ने त यो देशमा बिरलै होलान् तर विष्णुको भूमिगत जिन्दगीको बारेमा कमैलाई थाह होला ।
देशकै चर्चित गायिका कुनै सञ्चार माध्यममा छाउँदिनन् न त देश विदेशको कन्सर्टमै देखा पर्छिन्, न उनीसंग आफ्नो घर छ न एउटा मोबाइल र आखिर विष्णुलाई यस्तो कस्ले बनायो?
उत्तर :सुन्दरमणी अधिकारीले विष्णु गीत गाँउछिन्, सुन्दरमणी पैसा बुझ्छन् । विष्णुको जिन्दगीको रिमोट सुन्दरको हातमा रहेछ । विष्णुले श्वास फेर्न पनि अनुमति सुन्दरकै लिनुपर्ने जस्तो रहेछ । हुन त केही बर्ष अगि सुन्दरले विष्णुलाई बिहे गरे भन्ने सुनियो तर बिष्णु संग वा उनले गाएर कमाएको करोडौँ पैसासंग बिष्णुलाई थाहा भएन । आफ्नै श्रीमतीलाई भूमिगत शैलीमा बाँच्न विवश तुल्याउने अधिकार श्रीमानलाई हुन्छ र ? हाल विष्णु सुन्दरमणीको नजरबन्दमा छिन् ।
उनको वास्तविक अवस्था के छ कसैलाई थाह छैन न त उनका पिता तारा माझीलाई थाहा छ न दाजु बाबुराम माझीलाई नै । गीत त गाउँछिन् अझै पनि तर रोबोट शैलीमा रिमोट सुन्दरको हातमा छ ।
विष्णुको बारेमा यथार्थ बाहिर किन ल्याउँदैन ? यो देशका पत्रकारहरू रेखा थापाको पाइन्ट एक इन्च तल झरे हेडलाइन खबर बनाउने पत्रकार महोदयहरू किन चुपचाप छन् ? डन चरी मारिँदा सदन अवरूध्द गराउने दलहरू के गरिरहेका छन् ? यो देशमा महिला अधिकारकर्मी छन्कि छैनन् ? छन् भने कहाँ रत्यौली खेलेर बसिरहका छन् ?
हामी सम्पूर्ण संगीतप्रेमीहरूलाई एकमुष्ट जवाफ चाहियो यस अघि गायीका विष्णु माझीको भूमिगत जीवन शैलीको विषयमा नेपाल साप्ताहिकमा पनि एउटा फिचर प्रकाशित भएको थियो । उक्त फिचरका लेखक पत्रकार गोकर्ण गौतमले पनि विष्णु माझीलाई उनीसँग विवाह गरेको भनिएका कलाकार सुन्दरमणि अधिकारीले सम्पूर्ण नियन्त्रणमा राखेको उल्लेख गरेका थिए ।
उनले लेखेका छन्पाँच हजार गीतमा स्वर भरिसकेकी र दशकभन्दा बढी समयदेखि लोकगायनमा जमेकी बिष्णुको जीवन गुममान छ, लगभग भूमिगत शैलीमा । एक दशकको बीचमा उनी कुनै सार्वजनिक समारोहवा सञ्चारमाध्यममा देखा परेकी छैनन् । एउटा गीतगाएको अरु कलाकारले ६/७ हजार रुपियाँ बुझ्ने बिष्णुको नयाँ तस्बिर बाहिर नआएकै आठ बर्ष बित्यो । स्वदेश तथा विदेशका सांस्कृतिककार्यक्रममा उनको अत्यधिक माग छ तर कतै देखिन्नन् । समकक्षी कलाकारसँग उठबस छैन् । कतिपय भने स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराउँदा पनि उनले पर्दा लगाएर गाउने गरेको एक रेकर्डिस्टको भनाई छ । (श्रोतस् बादल घिमिरे)